स्तन र योनी कति टाइट भन्ने विषयले भयो बबाल, के योनी टाइट र खुकुलो हुन्छ भन्ने विषयमा विश्वास गर्नुहुन्छ तपाई ? तपाईलाई कस्तो योनी मन पर्छ ? – Gazabkonews
स्तन र योनी कति टाइट भन्ने विषयले भयो बबाल, के योनी टाइट र खुकुलो हुन्छ भन्ने विषयमा विश्वास गर्नुहुन्छ तपाई ? तपाईलाई कस्तो योनी मन पर्छ ?
काठमाडौँ । ब्रिटेनका क्लिनिकहरूमा महिलाहरूलाई विवादास्पद ‘कुमारीत्व परीक्षण’ सेवा उपलब्ध गराइने बीबीसी न्यूजबीट तथा १०० विमिन ले पत्ता लगाएको छ।
गत वर्ष अमेरिकी र्‍याप गायक टीआईले आफ्नी छोरीलाई हरेक वर्ष कुमारी भएनभएको परीक्षण गराउने गरेको बताएपछि तीव्र आक्रोश उत्पन्न भएको थियो
बीबीसीले कुमारीत्व पुनर्स्थापित गर्ने गरि ‘हाइमेन मर्मत’ गर्ने सामग्री अनलाइनमा विक्रीमा राखिएको पाएको छ
“यदि हामीले हाम्रा समुदयलाई मद्दत गर्‍यौँ र यसबारे बुझाउन सक्यौँ भने झिल्ली पुनर्स्थापित वा मर्मत गर्न आवश्यकता नै पर्दैन। विस्तारै त्यस्ता व्यवसाय आफैँ हराएर जानेछन्।” यो समाचार बिबिसी नेपाली सेवाबाट साभार गरिएको हो ।